Muqtaar Roobow iyo Axmed Madoobe oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay Baydhaba (Maxay ka hadleen?) - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Muqtaar Roobow iyo Axmed Madoobe oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay Baydhaba...
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhaba ayaa sheegaya in qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay bilaabeen faragelin ay ku sameynayaan arrimaha doorashooyinka dhowaan la filayo inay dhowaan ka dhacaan.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islam (Axmed Madoobe) ayaa dhowaan magaalada Baydhaba kulan qarsoodi ah kula yeeshay musharax Muqtaar Roobow (Abuu Mansuur), kulankaasi oo aan la shaacin waxyaabihii ka soo baxay isla markaana saxaafadda laga qariyay ayaan u kuur galnay si aan wax uga ogaano.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay xubno ku dhow labada mas’uul ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo musharax Muqtaar Roobow ay isku afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin: in Golaha Iskaashiga Dowlad goboleedyada uu taageero musharaxnimada Muqtaar Roobow.
Sidoo kale Muqtaar Roobow ayaa Axmed Madoobe u ballanqaaday sida aanu ku heleyno ilo wareedyada Baydhaba naga soo gaaraya in xubno isaga dhinaciisa ka soo jeeda uu u magacaabo Golaha Wasiirada maamulkiisa, iyadoo Abuu Mansuur si buuxda ugu qanciyay Axmed Madoobe inuu la safanayo Golaha Iskaashiga Dowlad goboleedyada.
Wararku waxay intaasi raacinayaan in musharaxnimada Abuu Mansuur ay iminka taageerayaan Madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland, inkasta oo ayna jirin dhaqaale ay ku bixiyeen musharax Muqtaar Roobow, hadana waxay bilaabeen olole ballaaran oo ay ku doonayaan inuu musharaxaan ku guuleysto madaxtinimada dowlad goboleedka K/galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale Axmed Madoobe iyo Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) ayaa iyagu si gaar ah ugu heshiiyay in haddii uu guuleysto Roobow la mideeyo siyaasadda maamullada K/Galbeed iyo Jubaland, taasi oo micnaheedu yahay sida uu horay dhowr goor u sameeyay Axmed Madoobe in xildhibaankii ka horjeesta la masaafuriyo isla markaana laga hortago in xildhibaanada aanay wax cod ah ku yeelan Baarlamaanka isla markaana labada qaab dhaqankoodu noqdo mid milateri.
Maamulka Jubaland, sida ay horay u sheegeen siyaasiyiin iyo aqoonyahano ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka maamulka Axmed Madoobe oo xukun keli talis ah ku maamula ayaa waxa uu meesha ka saaray doorka odayaasha dhaqanka beelaha ee iyagu soo xulay xildhibaanada Baarlamaanka, kuwaasi oo Axmed Madoobe kala kulmay dhibaatooyin kala duwan, wuxuuna haatan doonayaa in maamulka K/Galbeed uu maro wadadaasi taasi oo ay ku hor gudban yihiin caqabado fara badan.